Jiri obi ụtọ na-anabata Canada Stream Flo Company na-eleta cepai Na 14: 00 pm na November 11, 2018, Curtis altmiks, onye nduzi zuru ụwa ọnụ nke Stream Flo Company na Canada, na Trish Nadeau, onye nyocha nyocha ọkọnọ, tinyere Cai Hui, onye isi njikwa nke Shang ...
2017.30.3 Oman ụlọ ọrụ Petroleum Services
Jiri obi ụtọ nabata Maazị Shan si Oman ịga leta Cepai Na Machị 30, 2017, Mr Shan, onye isi njikwa ụlọ ọrụ Middle East Petroleum Services Company na Oman, ya na onye ntụgharị okwu Mr. Wang Lin, gara leta Cepai n'onwe ya. Nke a bụ nke mbụ Mr Shan gara Cepai. Bụrụ ...
Machị 18, 2017 - onye ahịa Egypt Mr Khaled
Jiri obi ụtọ nabata onye ahịa Egypt Mr Khaled na ndị otu ya ka ha gaa Cepai N'ụtụtụ nke Machị 18, 2017, ndị ahịa anọ nke Egypt, Mr.Khaled na Maazị kpọgidere gaa West maka nleta na nyocha, tinyere onye njikwa azụmaahịa mba ofesi Liang Yuexing. Na 20 ...
Machị 8, 2017 Bestway oilfield Inc.
DWWAT, isi ụlọ ọrụ BESTWAY OILFIELD INC. US, duuru ndị nnọchi anya ka ha gaa CEPAI. Na March 8, 2017, onye isi BESTWAY OILFIELD INC., Mr.Gus Dwairy, Mr.Ronny.Dwairy na Mr.Li Lianggen bịara Cepai maka nleta na nyocha iji discus ...
Jiri obi ụtọ nabata Maazị Paul Wang, Onye isi oche nke C&W International Fabricators nke United States ka ọ bịa leta ụlọ ọrụ anyị, wee nye ọrụ anyị nduzi.
site ha na 20-09-18
Na 9: 00am na March 7th, Paul Wang, Onye isi oche nke C & W International Fabricators nke United States, yana Zhong Cheng, onye njikwa nke alaka Shanghai, bịara Cepai Group maka nleta na nyocha. Maazị Liang ...
Jiri obi ụtọ nabata Maazị Steve, onye isi njikwa Redco equipment sales Ltd., Canada, ileta ụlọ ọrụ anyị, ma nye ọrụ anyị ọrụ nduzi.
Na Eprel 23, Maazị Steve, onye isi njikwa Redco equipment sales Ltd., Canada, gara nwunye ya na Cepai Group. Liang Yuexing, onye njikwa azụmaahịa mba ofesi nke Cepai Group ji ịnụ ọkụ n'obi soro ya. Na 2014 ...
Maazị GENA, onye isi njikwa KNG Group nke Russia, duuru ndị nnọchi anya ileta Cepai wee kpaa nkata
Na elekere 9 nke ụtụtụ na Mee 17th, Maazị GENA, Onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ Russia KNG Group, yana Maazị RUBTSOV, onye isi teknụzụ, yana Maazị Alexander, onye isi nchịkwa, gara Cepai Group wee tụlee mmekorita. Zheng Xueli so ya, onye njikwa ahia ahia ofesi ...
Ọ dịghị ọrụ ngo na-aga n'ihu n'ihu na Machị 28, 2019
Na Machị 28, Mazi Wael na Mazi Thomas, ndi isi oru ngo abuo nke Uae Azabia Petroleum Company (ADNOC), na Mazi Li Jiqing, onye isi ndi ahia nke China Petroleum Engineering and Construction Co., LTD. (CPECC), bịara ụlọ ọrụ iji gbanwee echiche ma duzie wor ...
Adabia kwadoro oru ngo na March 25, 2019
Na Machị 25, Maazị Pramod, onye isi na-azụ ahịa Uae Azabia Petroleum Company (ADNOC) na Maazị Hossam, onye isi nke Quality nke ARCHIRODON, gara ndị nnọchi anya Western ka ha nyochaa ma gaa na ọrụ Adabia. Maazị Liang Guihua, onye isi oche nke CEPAI Group, duru trad ndị mba ọzọ ...